As of Tue, 07 Apr, 2020 18:05
सूचना प्रविधि विधेयक पास भए सरकारको दिनगन्ती सुरु
सरकारले अघि सारेको सूचना प्रविधि विधेयकले नेपाली समाजलाई फेरि एकपटक तताएको छ । गत वर्ष सदनमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयकलाई आउने संसद्बाट पारित गराउने देखिएपछि नेपाली समाजका विभिन्न घटकहरू आन्दोलित हुन थालेका छन् । हालै मात्र नेपाल मिडिया सोसाइटीले यसबारे चासो व्यक्त गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको ठहर गर्दै मिडिया सोसाइटीले विशेषतः सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न अदालतको बनोट र गठनसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्त खतरनाक र आपत्तिजनक रहेको जनाएको छ ।
अझै पनि निराश छ, औधोगिक व्यवसायिक क्षेत्र
पर्सेली अर्थकर्मीहरूको साझा चौतारीको रूपमा स्थापित वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो स्थापनाको ७५ वर्ष पार गरेको छ । संस्थागत रूपमा फुड मर्चेण्ट एसोसिएसन, मर्चेण्ट एसोसिएन हुँदै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसम्म आफ्नो स्थापनाको आरम्भदेखि हालसम्मको यात्रा तय गरी रहँदा वर्तमान अध्यक्ष गोपाल केडियाको २८ वर्षको यात्रा संगठनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । आपूmलाई श्रमजीवी उद्योगी भन्न रुचाउने अध्यक्ष केडियाको ठूला उद्योग र प्रतिष्ठानहरू छैनन् ।
गरगहना निर्यात गर्न ड्युटी ड्र ब्याक मुख्य समस्या
मुलुकका सफल महिला उद्यमीको सूचीमा सधैं अगाडि आउने नाम हो– ज्योत्सना श्रेष्ठ । मेरीगोल्ड ज्वेलर्सकी सञ्चालक ज्योत्सनाको पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यावसायिक नै भए पनि उनको आफ्नै मेहनतले मेरीगोल्डलाई ज्वेलरी व्यवसायको पर्यायका रूपमा स्थापित गराउन सफल भएकी छन् । गत वर्षदेखि नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको नेतृत्वमा रहेकी उनी विगत ६ वर्षदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिमा पनि छन् । हाल महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिको समेत नेतृत्व सम्हालिरहेकी श्रेष्ठ अब भने व्यवसाय विविधीकरणतर्फ पनि लागेकी छन् ।
सामुदायिक वनलाई जथाभावी कर नलगाइयोस्
विश्वमै एक सफल र नमुना कार्यक्रमका रूपमा चिनिएको सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू यतिबेला आन्दोलनरत छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तीनवटै सरकारले जथाभावी रूपमा कर तोक्दा सामुदायिक वन तेहोरो करको मारमा परेको भन्दै आन्दोलनमा छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) को नेतृत्वमा विरोधसभाहरू भइरहेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग फेकोफनले वार्ताहरू पनि गरिरहेको छ ।
कसैको दबाबमा नपरी उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्छु
स्याङ्जामा जन्मेका नेत्रप्रसाद सुवेदीले आईएस्सी अध्ययन पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, बीएस्सी त्रिचन्द्र क्याम्पस र एमएस्सी अध्ययन अस्कल क्याम्पस काठमाडौंबाट गरेका थिए । समाजशास्त्र, एमपीए र कोरियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत उनले स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन् । कानुनमा एलएलबी गरेका सुवेदी सार्वजनिक प्रशासनमा एमफिल गरी गोल्डमेडलिस्टसमेत प्राप्त गरेका छन् । २०५२ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुवेदी २०५६ सालमा शाखा अधिकृत, २०६५ सालमा उपसचिव हुँदै २०७४ सालमा सहसचिव भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय तहअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।
तत्काललाई कठिन, दीर्घकालीन रूपमा फाइदा
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत तथा गैरव्यावसायिक कर्जामा कडाइ गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवाला औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमात्र नभई व्यवसायीहरूसमेत चासो दिएर केन्द्रीय बैंक पुग्ने गरेका देखिन्छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्तामा आधारित कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्नुका साथै ऋणीले कर्जा लिँदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पनि बैंक–वित्तीय संस्थामा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक विकासका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष
नेपालले बुधबार नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को भव्य सुरुवात गरेको छ । ‘लाइफटाइम एक्सपिरियन्सेज’ भन्ने नाराका साथ बुधबार राजधानी काठमाडौंसहित प्रदेशका राजधानीलगायत अन्य जिल्लाबाट तथा स्थानीय तहबाट समेत नेपाल भ्रमण वर्षको भव्य शुभारम्भ भएको हो । पर्यटनमार्फत मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको नेपाल भ्रमण वर्षलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महाअभियानको संज्ञा दिएकी थिइन् ।
दुई वर्षभित्र सबै उद्योग बन्द हुनसक्छ
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको नारा पनि खुबै लगाइन्छ तर उखु किसान हेरे त्यही समस्या, चिया किसान हेरे त्यही समस्या, धान किसान हेरे त्यही समस्या । वास्तवमा सरकार किसानमैत्री हुन नसकेकै हो त ? पूर्वी नेपालका चिया किसानहरूको चिन्ता छ, सरकारको उदासीनताले दुई वर्षभित्र सबै चिया उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने देखिएको छ । उनीहरूले सरकारले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा ठोस निर्णय गर्न नसके दुई वर्षभित्र नेपालका सबै चिया उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताएका छन् ।
जलस्रोत नीति र ऐनले पानी बाँडफाँडको विवाद समाप्त हुन्छ
तीन महिनादेखि रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव छन् । खानेपानी इन्जिनियरबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २९ वर्ष भयो । विशेषगरी भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका सिभिल इन्जिनियर श्रेष्ठसँग डोलीडारका साथै सडक विभागको महानिर्देशक, पूर्वाधार मन्त्रालयको सह–सचिवको अनुभव पनि छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सिँचाइ र जलस्रोतको सचिव रहेका उनी आगामी पाँच वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताउँछन् ।
५ वर्षपछि प्रत्येक वर्ष ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्य छ
सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित बुधबार नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को औपचारिक शुभारम्भ गर्दैछ । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ को शुभारम्भ १ जनवरी २०२० अर्थात् आजै काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा भव्यताका साथ हुँदैछ । सरकारले आजै ७ वटै प्रदेशमा एकसाथ ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ को शुभारम्भको तयारी गरिरहेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ को शुभारम्भको दिन सबैलाई देशैभरि दीपावली गरेर स्वागत गर्न आह्वान गरेको छ । स
साइबर क्राइमबाट बच्न सबै सचेत हुने बेला भएको छ
देशभरकै स्थानीय तहको लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्ने सर्भर ‘सूत्र’ बिग्रिएपछि २३ दिनमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेका ४० हजारवटा भौचरका तथ्यांक हराए । भौचर हराएपछि उत्पन्न समस्याले सरकारी तथ्यांकको आय–व्यय राख्ने महालेखा मात्रै होइन, समग्र सरकारकै सूचना प्रणालीमा त्राहिमाम पैदा भयो । देशकै सबैभन्दा ठूलो डाटा बैंकको अत्याधुनिक सफ्टवेयर नै ह्याक भएपछि यतिबेला महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सफ्टवेयर प्रतिस्थापनको तयारीमा जुटेको छ । यो पछिल्लो घटनाले ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पना गरिरहेको सरकारलाई चुनौती मात्रै थपेको छैन, वित्तीय अपराधबारे सचेत गराउन सरकारलाई थप झकझकाएको छ ।
सहकारीमा बचत र कर्जाको सुरक्षण कसरी ?
सरकारी तथ्यांकअनुुसार गत आर्थिक वर्षसम्म देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये बचत तथा ऋण १४ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीको संख्या ४ हजार छ । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीहरूले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । करिब ६५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण नेपाली आबद्ध भएको सहकारी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ७३ अर्ब १७ करोड सेयर पुँजी, ३ खर्ब २ अर्ब बचत र २ खर्ब ७३ अर्ब ऋण लगानी छ । तर, कारोबारको अवस्था सरकारको तथ्यांकभन्दा धेरै बढी रहेको अनुमान छ ।
नेताहरू सत्तामा जानलाई नै राजनीति गर्छन्
सत्ताधारी नेकपा र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भएको सम्झौतापछि बनेको राष्ट्रिय राजनीति अहिले तरङ्गित अवस्थामा छ । सत्ताधारी नेकपाले राजपालाई सरकारमा ल्याउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका लागि राजपाका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजपाले यसअघि उठाएको मागलाई बेवास्ता गरी सरकारमा सहभागी भए त्यो उसका लागि गलपासो बन्ने चर्चा भइरहेकाले राजनीति विशेष रूपले तातिन पुगेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संक्रमणकालीन अवस्थामै छौं
नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा मुलुक संघीय संरचनामा गएको दुई वर्ष हुँदैछ । प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा २०७४ साल माघ १८ गते पहिलो पटक प्रदेशसभाको बैठक बस्यो । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशसभाको पहिलो अभ्यास प्रदेश नम्बर ३ बाटै भएको हो । प्रदेशसभा मात्र होइन, अन्य ६ वटा प्रदेशभन्दा अगाडि नै सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्री चयन गर्ने प्रदेश पनि प्रदेश नम्बर ३ नै हो ।
निकुञ्जभित्र रिसोर्ट खोल्ने विषय हल्लामात्रै हो
प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो–नेपाल । वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता तथा तिनको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले वि.सं २०३७ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्थापना भएको थियो । नेपालमा रहेका विभिन्न वनस्पति, वन्यजन्तु, भू–दृश्यहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ सिकार आरक्ष, ६ सरंक्षण क्षेत्र छन् । ६ वटा संरक्षण क्षेत्रमध्ये ३ वटा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले २ वटा नेपाल सरकारले एउटा स्थानीय बासिन्दाले नै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यहाँका लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरू राष्ट्रका सम्पत्तिहरू हुन् ।